Easy English Part –2| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Easy English Part – 2
Easy English Part – 2
Posted by Wai Phyoe on Jan 7, 2012 in Community & Society, Education, How To.., Know-How, DIY |4comments
အခုတစ်ခေါက်တော့ ပိုပြီးလွယ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေပြောနေကျ စကားစုလေးတွေကို English လိုအလွယ်တကူ ပြောထွက်နိုင်စေဖို့” Easy English Part -2″ ကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
အကုန်လုံးအတွက် အဆင်ပြေပါစေလို့လဲကျွန်တော်မောင်ဝေဖြိုးကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခမျာ။ဒါလေးတွေကလဲကျွန်တော်သင်ပြီးသမျှကို “Share” လုပ်ပေးတာပါ။ကျွမ်းကျင်ပြီးသူများအဖို့လည်း လွတ်လပ်စွာ အမှားကိုထောက်ပြတာကို ကျွန်တော်က ခံယူဖို့အသင့်ပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
S + Be used to + Ving/N = ကျင့်သား၇နေပြီ။အဆန်းမပာုတ်တော့
Eg. I am used to wearing glasses. ကျွန်တော်မျက်မှန်တပ်၇တာအသားကျနေပြီ။
We are used to eating out. ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာစား၇တာကျင့်သာ၇နေပြီ။
I am used to smoking. ကျွန်တော်ဆေးလိပ်သောက်နေကျပါ။
I have lived in Myanmar for twenty years now so I am used to the poor.
ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေတာ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်သွားပြီး ဆင်း၇ဲမွေတေတာတွေကိုကျင့်သား၇နေပါပြီ။
(ဒီလိုတွဲသုံးလိုက်တော့ အ၇မ်းလွယ်တဲ့ Pattern လေးက လွှတ်တော်မှာတောင်တက်ပြောလို့၇တယ်နော် မယုံ၇င် မြို့တော်ခန်းမေ၇ှ့မှာ ဒီစာသားနဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုင်ပြီး၇ပ်နေ ကားတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်လာလိမ့်မယ် အဲ့လောက်ကိုစွမ်းတာခမျ)
Seem to + V1
S + = ပုံ၇သည်။ပာန်၇ှိသည်။ထင်၇သည်။
Seem + Adj
Eg. You seem to know it. မင်း အဲ့ဒါကိုသိထားပုံ၇တယ်နော်။
You seem to doubt me. မင်း ငါ့ကိုသံသယဖြစ်နေသလိုပဲ။
You seem to believe her. မင်း သူမကိုယုံကြည်နေပုံ၇တယ်။
* မထင်၇ဘူး၊ပုံမ၇ဘူးဆို၇င် Don’t လေးထည့်လိုက်ယုံပါပဲ။Past ဆို၇င် Didn’t ထည့်လိုက်၇ုံပါပဲ။
Government does not seem to hear the voice of public. လူထုအသံကိုအစိုး၇ကကြားပုံမပေါ်ဘူး။
You don’t seem to understand me. မင်း နားလည်ပုံမ၇ဘူး။
She seems kind. သူမသနားကြင်နာတတ်ပုံ၇တယ်။
She seems happy. သူမပျော်နေပုံ၇တယ်။
She seems ill. သူမဖျားနေပုံ၇တယ်။
တစ်ခါတလေကျ၇င် Easy English ဆိုပြီးတင်၇တာကြောက်တယ်ခမျ၊ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွမ်းပြီးသားသူများအဖို့ “ဒါလေးများကွာ ပို့စ်တင်နေသေးတယ်”ဆိုပြီးတွေးမှာစိုးလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ဘ၀တူ
Beginner ညီအကိုမောင်နှမများ အတွက်အထင်ခံ၇ပါစေဆိုပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို လဲ တပည့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပြီးသင်ပေးပါလို့ကြားဖြတ်ပြောပါ၇စေ။
S + used to + V1 = လေ့၇ှိခဲ့သည် (အတိတ်အတွက်သာ)
Eg. They used to go there off and on. သူတို့မကြာခနအဲ့ဒီကိုသွားလေ့၇ှိတယ်။
Police used to bully me. ရဲကကျွန်တော့်ကိုအနိုင်ကျင့်လေ၇ှိခဲ့တယ်။
He used to eat out. သူအပြင်မှာ စားလေ့၇ှိခဲ့တယ်။
I was disappointed because government used to steal something.
(မှတ်ချက်။ ။ဒီလိုတွဲသုံးလိုက်တဲ့အခါ အ၇မ်းလွယ်တဲ့ pattern ကဘယ်လောက် useful ဖြစ်သွားပါသလဲ ဒီလိုမျိုးတွဲသုံးပြီး ပြောစေချင်ပါတယ် ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လို Beginner တွေအတွက် သူများတွေထက်သာအောင်မပြောနိုင်တောင်
” Easy English Part-2″ အတွက် ၅ မိနစ်လောက် အချိန်ပေးလိုက်တာ စာဖတ်သူအဖို့ အကျိုး၇ှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ဆိုဒီထက် ပိုအချိန်ကုန်သက်သာပြီး ပိုအသုံးဝင်မယ့် Post လေးတွေကြိုးစားသွားပါအုံးမယ်။စာသင်ပေးခဲ့တယ်
“Success” မှ ဆ၇ာ၊ဆ၇ာမ များ နှင့် “British Council” မှာ ဆ၇ာ Thomas ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း……………………………………………”Comment”လေးတွေကိုစောင့်မျှော်၇င်း။
(အဲတာ အင်္ဂုလိလို ဘလိုရေးရမရဲဟင်) :?
နောက် part တွေကျ၇င် ကျွန်တော် Request အတွက်သီးသန့်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော်ခုညစ်နေတယ်ဗျာ အိမ်မှာ Type လုပ်တုန်းကအကောင်း Post တင်ပြီးကြည့်လိုက်၇င်
စာလုံးတွေကခြား အပိုဒ်တွေက ကပ်ကုန်………..ဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိဘူး
၀ီညောင်……ဂူ ကွီး…၀ေ၇ာင်းဝေ၇ာင်း…ညောင် အောင်း…အောင်း
အကြံပေးပါအုံးဗျ။အားပေးလက်စနဲ့ Easy Computer Part -1 ကိုလဲအားပေးကြပါအုံးဗျ
I m used to drinking because “ nga pauk phaw ” din’t give my money back that he borrow from me !
အဲဒီလို ရေးရင် မှန်လား ဟင်
ကောင်းတယ် မောင်ဝေဖြိုး ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေ။
လက်ခုတ်တီးပေးတာ မကြားဖူးလား မသိဘူး။
ဈေးဝယ်ရင် ပေါချောင်ကောင်းလို့ ပြောတယ်။
သင်ခန်းစာကျတော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲ။
လွယ်ကူကောင်း လုိ့ ပြောရင် ရမလား။